Waa Maxay Aragtiyaha Shirqoolka ‘Conspiracy theory’? | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Cabdifataax Xasan Maxamed 'Barawaani', August 26, 2020
Waa Maxay Aragtiyaha Shirqoolka ‘Conspiracy theory’?
Cabdijabaar Sh. Axmed — March 24, 2020
Waa Maxay Aragtiyaha Shirqoolka ‘Conspiracy theory’? Aragtida shirqoolku waa sharraxaad ama mala awaal muujinaya in laba qof ama in ka badan ama urur abaabuleen inay sababaan ama qariyaan, iyaga oo adeegsanaya qorshe qarsoodi ah iyo ficil ula kac ah, dhacdo ama xaalad sida caadiga ah loo arkaa inay tahay sharci darro ama waxyeello.
Waa maxay shirqool?
Shirqoolku waa fal ka duwan ficilka dambiilenimada ee lagu horumariyo. Tusaale ahaan, qofkii qof kale la shirqoola tuugada oo runtii sameeya tuuganimo waxaa lagu soo oogi karaa labadaba shirqool ama tuugo. Shirqoolku waa dambi, ama diyaarin dambi.
Fikradaha shirqoolnimada waxay ka hortagaan been abuurka waxaana lagu xoojiyaa sababaynta wareegga: labadaba caddeynta ka dhanka ah shirqoolka iyo maqnaanshaha caddaynta waxaa dib loogu tarjumaa inay yihiin caddeyn run ah, taas oo shirqoolku u noqdo arrin caqiido halkii ay noqon laheyd wax la caddeyn karo ama la beenin karo.
Fikradaha shirqoolnimada ayaa loo haystaa inay yihiin xaalad bina’aadan. Gaar ahaan, markay dhacdooyinka saameyn weyn ku yeeshaan nolosheena, dhacdooyinkaas ayaa noqon kara qaab ruuxi ah, siyaasadeed, akhlaaq ahaan ama cilmi ahaan ah.
Dhacdooyinka u muuqda kuwo aan caqli gal ahayn ayaa nagu dhiirrigeliya inaan si adag u fiirino sababta ka dambeysa illaa aan ka qancinno. Dad badan oo cilminafsiyeedka waxay aaminsan yihiin in qofka rumaysta hal fikrad oo shirqool ah, uu sidoo kale rumeysan doono kuwa kale.
Fikradaha ku saabsan shirqoollada waxaa danaynaayay dadka ku taqasusay cilmu-nafsiga iyo khubarada hiddaha illaa 1960-yadii. Dilka Madaxweynihii horre ee Mareykan John F. Kennedy wuxuu soo jiitay shaki weyn oo ku saabsan dhimashadiisa. Waxaa weli jira su’aalo ku saabsan dambiilayaasha dhabta ah ee ka dambeeyay dilka.
Fikradaha ku saabsan dhacdooyinka noocaas ahi sida dilkii John F. Kennedy oo adduunka oo dhan lawada ogyahay, sidoo kale dilkaas wuxuu kamid yahay shirqooladii ugu yaabka badnaa. Waxaa loo sameeyay aflaam iyo buugaag, sidoo kale illaa hadda lama haayo dambiilaha rasmiga ah ee dilkaas gaystay.
Aragtida shirqoolka siyaasadeed, siyaasadda shirqoolka waxaa loola jeedaa koox dad ah oo ku midoobay himilada dammaanad qaadista, badalida ama duminta awoodda siyaasadeed ee dalka maamusha. Caadi ahaan, ujeedka ugu dambeeya ayaa ah in awoodda lagu helo kacdoon afgambi ama dil.
Xilligaan casriga, fikradaha shirqoolka siyaasadeed ayaa had iyo jeer la faafiyaa iyada oo la adeegsanayo warar been abuur ah oo lagu baahiyo warbaahinta bulshada. Daraasad la sameeyay sanadkii 2017 oo laga sameeyay wararka been abuur ah ayaa lagu daabacay Xarunta Shorenstein waxaana lagu ogaaday in “macluumaadka khaldan ee la baahiyo ay hadda tahay tan ugu sareysa”.
The Illuminati waa magac loo bixiyay kooxo dhowr ah, kuwo dhab ah iyo mid saadiq ah. Taariikh ahaan, magacu badanaa waxaa loola jeedaa Bavaria Illuminati, oo ah bulsho qarsoodi ah oo iftiimin loo yaqaan ‘Enlightenment-era secret’ oo la asaasay 1dii Meey 1776, Bavaria, oo maanta qayb ka ah Jarmalka. Ujeeddooyinka bulshadaan waxay ahaayeen in laga hortago cibaadaada, faquuqa, saameynta diinta ee nolosha dadweynaha, iyo ku xadgudubka awooda dowladaha.
Fikradaha shirqool siyaasadeed waxay qaadan karaan qaab guud iyo qaabab balaaran oo kusaabsan dagaalada iyo unugyada caalamiga ah, laakiin sidoo kale waxaa loo arki karaa heer deegaan, sida aragtida shirqoolka.
Dadka qaar waxay yiraahdaan ‘fikradaha shirqoolka waa aragti sheydaan’.
Waxaa jira aragti loo yaqaano ‘The Illuminati conspiracy theory’ waa Fikradda shirqoolka ee loo yaqaan ‘Illuminatiga shirqoolka’ shirqoolkaan wuxuu sheegayaa inay yihiin bulsho qarsoodi ah oo si dhab ah u maareeya dhammaan dawladaha adduunka, kana dambaysa dhacdooyinka, waxayna si tartiib tartiib ah u hirgelinayaan waxa loo yaqaano Amarka New World Order (NWO), kaasoo soo afjari doona xukunka hoggaamiyaasha caalamka.
Next post Waxaanu Jecel Nahay Reer Binu Israa'iil!
Previous post Macron Ma Wuxuu Doonayaa Inuu Sharciyeeyo Cunsurinimada iyo Dhaleecaynta Israa’iil?
Cabdifataax Xasan Maxamed 'Barawaani', September 5, 2020